Toeram-ponenana fiofanana Plasma
Ny Plasma dia ahitana marika maromaro tafiditra amin'ny famerenana ny vatan'ny olona, ​​ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny sela. Noho ny fampidirana plasma, ny vatana dia mahazo fanentanana hametraka ny fomba voajanahary amin'ny fanavaozana sy ny fanarenana. Ny platma-rich dia manome ny fitomboan'ny sela hoditra vaovao avy amin'ny tongotra, ny fampiroboroboana ny asidra hyaluronic, ny collagen ary ny elastin, manatsara ny fiterahana ary mampihena ny fatran'ny metabolisma amin'ny tavy.
Ny metodôlôjia dia misy dingana maromaro. Voalohany, nalaina avy amin'ny fitsaboana marary (20 hatramin'ny 120 ml) ny santionan'ny ra. Ity rà ao amin'ny foibem-panafody manokana ity dia mizara ho singa telo, ny iray amin'ireo dia ny plasma manan-karena.
Mandritra ny dingan'ny fampiofanana ny plasma, ny plasma dia aterina any amin'ny faritra misy ny hoditra amin'ny fanampiana ny injections marobe. Mila adiny iray izany. Ny fianarana dia mirakitra 2-4 fomba fitsaboana mandritra ny 2-3 herinandro; Ny herin'ny plastika dia maharitra iray taona eo ho eo.
Ny fampiakarana ny plasma dia azo atao amin'ny faritra rehetra amin'ny tarehy, ny tendany, ny décolletage, ny tanana, ny kibo. Izy io koa dia ampiasaina hamerenana ny volony ary hampivoatra ny fivoarany.
Alohan'ny fomba fitsaboana plastika mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 andro dia tsy tokony haka antikoagulants (aspirine, heparin) ianao, hanaisotra ny fampiasana ny alikaola sy ny sakafo matavy.
Laseran-plasmolifting Laser dia mampifandray ny fitsaboana sy ny fitsaboana laser. Vantany vao vita ny fampidirana plasma mba hampisy azy io, dia atao ny fitsaboana laser. Izany dia ahafahanao manitatra ny vokatra sy mamokatra vokatra azo tsapain-tanana. Indraindray ny dingana amin'ny laser nasongadina dia mialoha ny fampidirana plasma-ranon-plasma.
Ny plastmolifting Laser amin'ny sehatra nasolabial nasals, lamosina, handrina sy chin dia manolo ny plastika contour miaraka amin'ny fillers.
Fampahalalana momba ny face plasmolift:
moka amin'ny hoditra;
poana, hoditra, elastose;
peeling, hoditra maina, famaritana mahery vaika amin'ny UV;
fanarenana ny hoditra taorian'ny simika na laser peeling.
Noho izany, amin'ny fanampiana ny plasmolifting, afaka manaisotra aknemana, avy amin'ny kankana tsara sy ny marika marika, manome fiovàna, hampitombo ny turgor hoditra. Misy mangana ihany koa ny mason-koditra, ny hoditry ny tarehiny aorian'ny plazmolifting dia lasa manja sy mamy, mamolavola ny lokony. Niova ny fiovana taorian'ny fomba fanao voalohany.
Tena tsara ny mitondra ny plasmaolifierung miaraka amin'ny bioreavilitation, mezorollerom na fomba fitsaboana cosmetology hafa.
Toe-draharaha momba ny fiakarana plasma
Tsy azo atao ny tranga toy izany:
fitondrana vohoka sy fihomehezana;
ny fizotry ny fifindran'ny aretina eo amin'ny sehatry ny fepetra;
aretina mifindra amin'ny toeran'ny fiankinan-doha;
Ny taonan'ny marary dia 25 taona.
Ny voka-dratsiny sy ny fahasamihafana taorian'ny plazmoliftinga
Ny fomba fitsaboana plastika dia heverina ho tsy misy andavanandro sy azo antoka, saingy misy vokany mahagaga mbola misy. Izany no mibontsina ny hoditra, ny lamosina ary ny mangana kely aorian'ny plastmolifting amin'ny toeram-pitsaboana. Saingy ireo rehetra ireo dia hita ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Mba hisorohana ny mety hisian'ny aretina mandritra ny fizotran'ny fampidiran-dra, dia asio marika amin'ny toeram-pitsaboana ampy ny plasmolifting izay hajaina tsara ny fitsipika momba ny fanasitranana sy ny fahadiovana.
Entin'ny ati-doha amin'ny nify
Glue for extension extension
Glycerine ho an'ny tarehy
Scars taorian'ny akne
Famaranana amin'ny famonoana
Ny metastazy ao amin'ny aty - prognose
Ilay mpanao heloka bevava dia nanimba ny sangan'asan'i Justin Bieber
Inona no hanomezana sakafo ny corella - ny momba ny sakafo mahavelona amin'ny biby fiompy
Ahoana no hisafidianana seza ho an'ny zazalahy?
Iza ireo nomena ho an'ny lokan'ny Golden Raspberry 2018?
Antigadina ho an'ny alika
Ahoana ny fomba hanaovana ny sarin'i Guy Fawkes?
HPV amin'ny vehivavy - fitsaboana
Ahoana no hampihenana ny tratra aorian'ny fiterahana?